Public Kura | » संसद विघटन : प्रतिगमनको दोस्रो एपिसोडका ६ वटा विशेषता संसद विघटन : प्रतिगमनको दोस्रो एपिसोडका ६ वटा विशेषता – Public Kura
संसद विघटन : प्रतिगमनको दोस्रो एपिसोडका ६ वटा विशेषता
‘नेपोलियन बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेअर’ मा कम्युनिस्टका गुरु कार्ल मार्क्सले लेखेका छन्, ‘कहिलेकाहिँ इतिहास दोहोरिन्छ : पहिले त्रासदीका रुपमा, त्यसपछि प्रहसन अर्थात मजाकका रुपमा ।’
कार्ल मार्क्सका नेपाली चेलाद्वय केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर इतिहास दोहोर्याएका छन् । पुस ५ को पहिलो विघटन त्रासदीका रुपमा आएको थियो, आज मध्यरातको दोस्रो विघटनचाहिँ मजाक बनेर आएको छ । इतिहासले पनि कहिलेकाहिँ बडो मजाक गर्दोरहेछ !
गत पुस ५ मा केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले आपसमा मिलेर गरेको संसद विघटन पहिलो प्रतिगमन थियो । आज राति (१ बजे) भएको संसद विघटनचाहिँ प्रतिगमन भाग–२ हो । पुनस्र्थापित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या हो । पहिले संसदको बलात्कार गरियो, पछि हत्या भयो ।
अहिले देशमा कोरोनाको महामारी छ । जनता दिनहुँ अक्सिजन र बेड नपाएर मरिरहेका छन् । सरकारले खोप किनेर ल्याउन सकिरहेको छैन । तर, राष्ट्रिय एकताका साथ जनताको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकारले देशलाई जबरजस्त मध्यावघि चुनावतिर धकेलेको छ ।
फागुन ११ गते संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । दिएनन्, ठिकै छ । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अनौठो ढंगबाट एमाले र माओवादीलाई फुटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक महिनाभित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । लिएनन्, त्यो पनि ठीकै छ । विपक्षीहरुले ओलीको राजीनामामा अड्डी लिएका थिएनन् । अढाइ महिनासम्म सरकार चलेकै थियो । यतिसम्म कि नेकपाको एकता भंग भइसक्दा पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन अढाइ महिनासम्म फिर्ता लिएको थिएन । ठीक यहीबेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो ।
संविधानको लेखोट, सर्वोच्चको नजिर अनि संविधानविदहरुको विश्लेषणलाई आधार मान्दा धारा ७६(५) अन्तरगत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन पर्न पाउँछ । ७६ (५) सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले सांसदहरुको व्यक्तिगत संख्या हेरेर निर्णय दिनुपर्छ, दलको ह्विप होइन । यो आधारमा हेर्दा शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी जायज देखिन्थ्यो, जसलाई राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु संविधानको बर्खिलाप हो भन्ने प्रष्टै छ । तर, संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भनेजस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफ्नो पकेटको डायरीजस्तै बनाए । संविधानमाथि गरिएको यो मजाक कुनै पनि तर्कद्वारा ढाकछोप हुन सक्दैन ।
बालहठ र मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ । संसदमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग ९३ मत मात्रै थियो । शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याई–तेह¥याई भन्दैथिए– मसित ९३ मत मात्रै भो, बहुमत जुटाउन सकिनँ, ह्याण्डस अप गरें । उता राष्ट्रपतिले विहीबार राति गरेको सरकार गठनको आह्वानमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेकाले नयाँ सरकारको आह्वान गरिएको लेखिएको थियो । तर, मध्यरातमा ओलीसँग १५३ मत रहेको देखाइयो । १५३ मत आफूसितै थियो भने धारा ७६(५) को सरकारको आह्वान किन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
१. पहिलो प्रतिगमनमा जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएका थिए । दोस्रो प्रतिगमनमा राष्ट्रपतिको पनि संलग्नता प्रष्टिएको छ । राष्ट्रपति पनि प्रतिगमनको मतियार बनेको प्रष्ट भएको छ ।
५. पहिलो प्रतिगमनका बेला भारतले सकेसम्म आफूलाई न्युट्रल देखाउन खोजेको थियो । कसैले बोल्न नसकेर डराएका मात्रै हुन्, प्रतिगमन भाग–२ मा छिमेकी भारत आफैं खेलाडीका रुपमा मैदानमा प्रस्तुत भएको छ । भारतले नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । केपी ओली र महन्थ ठाकुरको साँठगाँठ र अनौठो मिलन यसैको एउटा नतिजा हो । र, यो प्रतिगमन भाग–२ को नयाँ विशेषता हो । बिहीबार बालुवाटारमा सम्पादहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बडो गर्वका साथ भनेका थिए कि विपक्षी मित्रहरु तानजस्तो दक्षिण–उत्तर,.उत्तर–दक्षिण गरिरहेका छन्, क्रिकेट मैदानमा अर्कैले बल च्याप्प समातिसकेपछि दौडेर रन आउँदैन !
यी सबै परिघटनाले गर्दा प्रतिगमन भाग– २ को एपिसोड गत पुस–फागुनको भन्दा केही लामो हुने देखिन्छ । यसलाई छोट्याउने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । या त प्रतिनिधिसभा आफैं जाग्नुपर्यो, जसको सम्भावना फितलो छ । रातोपाटीबाट साभार